အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ( Nov 2012) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ( Nov 2012)
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ( Nov 2012)
Posted by kai on Nov 2, 2012 in Myanmar Gazette, News, Opinions & Discussion | 46 comments
BURMA RELATED NEWS NOVEMBER 01, 2012.
Reuters – World Bank earmarks $245 mln for Myanmar, outlines work plan
AP – World Bank approves new aid for Myanmar, prepares to resume lending
AP – Myanmar says it has evidence communal violence was organized by groups and individuals
AFP – Myanmar MPs approve business-friendly investment law
AFP – Myanmar’s neighbours urged to let in refugees
AFP – Myanmar unrest could develop into ‘terrorism’: govt
Business Insider – The Spike In Myanmar’s Opium Production Could Destabilize All Of Asia
IANS – Myanmar to build airport
Boston Globe – Civilians in western Myanmar told to turn in arms
UPI – Myanmar’s refugee crisis growing
Bernama – Myanmar’s Changes Prompt International Air Links Boom
Bernama – Myanmar Deliberates On Legitimising Permanent Residence For Foreign Investors
Bloomberg News – Silk Road Plans Investments for Myanmar Fund
Global Times – Myanmar hunts for manipulators behind Rakhine riot
Asia News Network – Asean must takeastand on Myanmar ethnic violence
Telegraph.co.uk – Burma considers citizenship for Rohingya Muslims
The Irrawaddy – Violence Taking Major Toll on Arakan Economy
The Irrawaddy – Thousand Interrogated for Arakan Strife Role
The Irrawaddy – Sir Cliff Enjoys Burmese ‘Summer Holiday’
Mizzima News – Abuses, land grabs ongoing in Burma, says NGO
Mizzima News – Gov’t, KIO agree to political dialogue
Mizzima News – Intermediate education:away to createayoung workforce in Burma
DVB News – MP’s associate accuses party chair of defamation during hearing
DVB News – Former Thai prime minister to visit Burma next week
ပြောချင်တာက.. Intrade.com. ဆိုတဲ့..၀က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပါ..။
ခန့်မှန်းချက်တွေကို.. ငွေနဲ့လောင်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတာမို့.. စိတ်ဝင်စားပြီး.. ၂ရာဖိုး. .လောင်းထားကြောင်း..
အဲဒီဘစ်ဇနက်စိတ်ဝင်စားရင်.. စိတ်ဝင်စားသူတွေစုပြီးလုပ်နိုင်ကြဖို့.. ဘရိမ်းစထရုန်းလုပ်ချင်ပါကြောင်း..
Forex Flash: Obama jumps in betting markets ahead of election – BBH
Posted 11/1/2012 9:52 AM from FXstreet.com in Investing, Forex and Currencies
FXstreet.com (Barcelona) – Brown Brothers Harriman analysts have takenalook at the odds onaPresident Obama re-election and notedashortening on the odds on his success according to markets such as Intrade.com.
They cite his response to Hurricane Sandy has bolstered his Presidential image and believe that popular Republican Governor Christie of New Jersey’s public praise of his efforts have been extremely beneficial.
Read more: http://community.nasdaq.com/News/2012-11/forex-flash-obama-jumps-in-betting-markets-ahead-of-election-bbh.aspx?storyid=186333#ixzz2B3MKFHI5
ိအိုဘားမား အခြေနေကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ ချီကာဂိုက တယောက်ကို ညက လှမ်းမေးတာ ဘယ်သူ့ကြိုက်လဲ ဘယ်သူ့ဗုတ်မှာလဲ ဆိုတော့ ၂ ယောက်လုံးမကြိုက်ဖူးတဲ့။
အိုဘားမားက လေကောင်းတယ်တဲ့ ။ အပြောကတော့ ရှယ်။ လူက မထက်ဖူးတဲ့။ သူတက်ရင် immigrant တွေ ဆင်းရဲသားတွေ ကောင်းစားမယ်။ ဟိုတယောက်တက်ရင် သူဌေးတွေ ကောင်းစားမယ်တဲ့ ။
သူတို့လို အလယ်လတ်တွေက အခွန်ပိုထမ်းရမယ် ဒါကြောင့် ဘယ်သူတက်တက် သူ့အတွက် ဘာမှ မထူးတာမို့ ဘယ်သူ့မှ မကြိုက် မဗုတ်ပါတဲ့ ။ အရင် ဟီလာရီနဲ့တုန်းကတော့ ဟီလာရီကို ကြိုက်သတဲ့ ထက်လို့တဲ့။ ဒါပေမဲ့ မဗုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။
ခု သူလုပ်နေတဲ့ Big4( KPMG) က ဒီဝင်တော့မှာဆိုတော့ သူတောင် ပြန်လာဖြစ်မယ် ထင်ရဲ့ နောက်နှစ်။
အနော်တို့ကိုယ်စား ဒဂျီး လောင်းကြေးတင်လိုက်လေ… နိုင်ရင် ပြန်ပေး ရှုံးရင်တော့ ရှုတ်ရှုတ်ရှက်ရှက်တွေ စိတ်မ၀င်စားဘူး
သူကြီးကိုယုံပြီး တစ်တိုင်းပြည်လုံး ပုံအောလောင်းလိုက်မယ်… သူဌေးဖြစ်လျော့လဟယ်… ဟုတ်တယ်.. ဒါအမြန်ဆုံး သူဌေးဖြစ်မယ့်နည်းပဲ။ (တစ်တိုင်းပြည်လုံးကုန်သွားရင်တော့ သူကြီးနဲ့သာဆိုင်ပါကြောင်း)
လူတွေများနော်.. လောင်းစရာမရှိ ရှိတာရှာလောင်းနေကြတော့တာပဲ။ ဒီပို့စ် ကို Print out ထုတ်ပြီး လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ သွားကပ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂ လုံးထီလောင်းတာထက်တော့ နည်းနည်း သာမယ်ထင်တယ်။ အနည်းဆုံး ခန့်မှန်းတတ်ဖို့တော့ သင်ယူဖြစ်သွားကြမယ်ထင်တယ်။ (မတူသောအမြင်ဖြင့် မန့်ကြည့်တာ)
လူတွေများနော်.. လောင်းစရာမရှိ ရှိတာရှာလောင်းနေကြတော့တာပဲ။ ဒီပို့စ် ကို Print out ထုတ်ပြီး လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ သွားကပ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂ လုံးထီလောင်းတာထက်တော့ နည်းနည်း သာမယ်ထင်တယ်။ အနည်းဆုံး အဲဒီ့လို ခန့်မှန်းတတ်ဖို့တော့ သင်ယူဖြစ်သွားကြမယ်ထင်တယ်။ (မတူသောအမြင်ဖြင့် မန့်ကြည့်တာ)
5:30 – 6:15 Keynote
Samir Kapuria, VP of Business Strategy & Security Intelligence, Symantec
Test Your Security Skills foraChance to Win $2500!
Grab your laptop and join us for the upcoming Symantec Cyber Readiness Challenge. All skill levels welcome and great prizes to be won!
This one-of-a-kind event invites security professionals and ethical hackers like you to help further improve their security skills so they can ultimately better protect their company or organization. Notasecurity professional? Feel free to forward to your colleagues and invite them to join us.
Come get an update on the global threat landscape and how current IT trends are requiring organizations to take new approaches in information security.
Stay for the Challenge, an exciting cyber “Capture the Flag” (CTF) simulation. Designed for all aptitude levels, you will have the opportunity to win great prizes, including:
Cash prize of $2500 for the top score
Samsung Galaxy Tablet 10.0
We will showcase the following Security Demo stations:
Mobile Security & Device/Application Management
Security Information Manager (SSIM)
Don’t miss this chance to participate inalive cyber attack simulation, inspired by real-life security issues that will help you better understand the vulnerabilities of today’s global threat landscape and ultimately gain critical security intelligence to improve your organization’s security posture.
IMPORTANT: Participants will need to provide their own laptops.
တိုက်ရိုက်ကြီးကူးထည့်လိုက်တယ်။ ဘာသာရေးအကြောင်းပါပေမဲ့ မငြိဘူးထင်တာဘဲ
သမ္မတလုံခြုံရေး( Secret Service)သူတို့ဆိုင်ကိုရှာဖွေတာ အလိုမရှိကြောင်း ပြောတဲ့ဆိုင်းဘုတ်..။
အမေရိကအခြေခံဥပဒေ First & Fourth Admendment ဖြစ်တဲ့.. “လွတ်လပ်စွာ..”အဓိပ္ပါယ်ကို ညွှန်းဆိုချက်တခု..
YANGON | Thu Nov 8, 2012 1:33am EST
(Reuters) – U.S. President Barack Obama plans to visit Myanmar on November 19 and meet both his counterpart, Thein Sein, and Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi,asenior government source in the Southeast Asian country said on Thursday.
ဒါလေးလည်းဂွတ်သဗျ။ မူရင်း http://www.maukkha.org/index.php/feature-article/2510-2012-11-08-08-04-21
ကျွန်တော်သည် စာသမားဖြစ်သဖြင့် အားကစားလုံးဝ ဝါသနာမပါကြောင်း ဦးစွာပြောချင်ပါသည်။ အိပ်ချိန်နည်းနည်း၊ စာဖတ်ချိန်များများနှင့် ဘဝကိုအခြေချထားမိသဖြင့် အားကစားလုပ်ရန်လည်း အခြေအနေမပေးပါ။ သို့သော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင် မေဂျာစိတ်ဓာတ်၊ အဆောင်စိတ်ဓာတ်များဖြင့် အားကစားပွဲများကိုတော့ လိုက်လံအားပေးခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တက်ချိန်က RC ဟုခေါ်သည့် ခန်းမအတွင်း ဘော်လီဘောလေ့ကျင့်နေကြသည့် ကျောင်းသားများ၏ ဘောလုံးရိုက်သံက တအုံးအုံးထကာ နှလုံးတုန်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ သူတို့ အရပ် အမောင်း၊ ခွန်အားဗလတွေလည်း သန်မာကြသည်။ ထိုခေတ်ကကျောင်းသားဆိုသည်မှာ ဆိုရှယ်နှင့် အားကစားတွင် ယနေ့ခေတ်ကျောင်းသားတွေထက်သာသည်။ မြို့နယ်၊ တိုင်း၊ ပြည်နယ်၊ ကျောင်းသား လက်ရွေးစင် အဆင့်များမှသည် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်တွေဖြစ်သွားကြသည်။ ထိုခေတ်က လက်ရွေးစင်ဖြစ်ရန် ပြိုင်ပွဲတွေရှိသည်။လေ့ကျင့်ရန် အားကစားကွင်းတွေရှိသည်။ စာလည်းမပိ။ ကျောင်းမှ အိမ်ပြန်ရောက်လျှင် သို့မဟုတ် ကျောင်းလွှတ်လျှင် အိမ်မပြန်ဘဲ ဘောလုံးကွင်းထဲ၊ ဘော်လီဘောကွင်းထဲ တန်းဆင်းကာ လေ့ကျင့်ကစားကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သန်မာထွားကြိုင်းသည့် ကျောင်းသားတွေနှင့် မြန်မာ့အားကစား မြင့်မားခဲ့ဖူးပါသည်။
မကြာမီ ကျောင်းသားအားကစားပွဲတွေ ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းသားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးနေသော အားကစားရုံတစ်ရုံသို့ ရောက်သွားမိပါသည်။ ကျွန်တော့် ဆရာတစ်ဦးသည် ယနေ့တိုင် အားကစားပွဲများကျင်းပရေးကို ဝါသနာထုံသဖြင့် ရာသီချိန်ရောက်လျှင် အားကစားကွင်းသို့ရောက်နေတတ်သည်။ ယခင်က အားကစားတွေ လေ့ကျင့်လျှင် ကိုယ့်ကျောင်း ဘောလုံးကွင်း၊ ဘတ်စ်ကက်ဘောကွင်းတွေနှင့် ကျောင်းသား တွေ မျက်နှာမငယ်ကြပေ။ ယခုခေတ်တွင်မှ ဘောလုံးကွင်းတွင် ကျောင်းတိုးချဲ့ဆောက်ကြသည်။ ဘတ်စ်ကက်ဘောကွင်းကို ကျောင်းသားစုဝေးကွင်းလုပ်ပြီး အလယ်တွင် ကျောက်တိုင်တွေစိုက်ကာ မြန်မာ့ပညာရေးကို ကျောက်သားအက္ခရာတင်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ကြသည်။ စိတ်ကူးပေါက်ရောက် ကောက်လုပ်တတ်သည့် ပညာရေးလောကသားတွေကြောင့် ကစားကွင်းတွေပျောက်ကာ ကစားကွင်းမရှိသော ကျောင်းတို့၏တိုင်းပြည်ဘဝရောက်ခဲ့ရသည်။
ကျောင်းသားများ ယခုအခါ အားကစားလေ့ကျင့်လျှင် ပြည်သူ့အားကစားကွင်းသာရှိတော့သည်။ ကျွန်တော့် ဆရာက ဘော်လီဘောရုံတွင် ရှိနေသည်ဆိုသောကြောင့် မိုးလုံလေလုံရုံဘက်သို့ ထွက်ခဲ့သည်။ ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါ့မလားဟု စိတ်ထဲတွင်ထင်မိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရုံအတွင်း ဝင်လိုက်မှ နှစ်သင်းဘော်လီဘောကစားနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ပင့်ထောင်အား မပါ၊ ခုတ်ရိုက်အားမရှိ၊ ဘောလုံးကို တစ်ဘက်သို့ မရောက် ရောက်အောင် လက်ဖျံတွေနှင့် တွန်းပို့နေသလို ဖြစ်သည်။ အားပေးမည့်သူလည်းမရှိ။ တစ်ချိန်က ဆူညံစွာအော်ဟစ်နေသည့် ကျောင်းများမှ အားပေးသော ကျောင်းသားလည်းမရှိ။ စုံစမ်းကြည့်သောအခါ ကျောင်းတွေမှ ကျောင်းအုပ်တွေကမလွှတ်ကြောင်း၊ ရန်ဖြစ်မည် စိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ အတန်းကြီးတွေကလည်း စာမေးပွဲနီးသောကြောင့် မလာချင်ကြကြောင်းသိ လိုက်ရသဖြင့် အတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ဘော်လီဘောကွင်းတွင်း အုန်းဒိုင်းကြဲနေသော ဘောလုံး ခုတ်သံ၊ ရိုက်သံ၊ အားပေးသံတွေ တစ်ချိန်က အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ခြင်းသည် အိပ်မက်ပမာဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ကျွန်တော့်ဆရာက ကျွန်တော့်ကို ပြေးခုန်ပစ် လေ့ကျင့်နေကြသည့် ကွင်းဘက်ဆီသို့ ခေါ်သွားသည်။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေက ပုဆိုး ထမီချွတ်ပြီး ဘောင်းဘီတိုနှင့်ပြေးရမည်ကို ရှက်နေကြသည်။ ပိုဆိုးသည်က အပြေးသမားတွေပေါင်က ပုလွေရိုးလိုဖြစ်နေသည်။ အမြင့်ခုန်မည့်သူက နံကိုင်းနေသည်။ သံလုံးပစ် မည့်သူက သံလုံးကိုပင် နိုင်ပါ့မည်လောဟု စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော့်ဆရာက
“မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကို လွှမ်းရမည်ဆိုကတည်းက ကျောင်းသားအားကစားတွေလည်း ပျက်တော့တာပဲ” ဟု ရယ်မောရင်းပြောကာ ကျွန်တော့်ကို လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ ဆွဲခေါ်သွားသည်။
“ငါတို့ တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် ကျောင်းသားအားကစားပွဲဆိုတာ လုပ်နေရသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပါလက်ပါ အရင် ကလို ပွဲမျိုးတွေ မဟုတ်တော့ဘူး။ စီမံချက်ရှိလို့ လုပ်ပေးနေရသလိုမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။ ကျောင်းသားတွေက အရင်ကလို အားကစားတွေ သိပ်ပြီး စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းသမားတွေဆိုရင် ပိုဆိုးသေး တယ်။ ကျောင်းတွေကိုက အောင်ချက်ကျမှာစိုးလို့ဆိုပြီး အားကစားဆိုရင် လွှတ်ကို မလွှတ်တော့တာ။ အဖြစ် သဘောလုပ်နေရတာပဲရှိတယ်။ နံပိန်ခါးကိုင်းတွေနဲ့ ဘယ်လို ကမ္ဘာလွှမ်းအောင် လုပ်နိုင်မှာလဲ” ဟု ဆွေးမြေ့စွာ ပြောနေသည်။
ကျွန်တော်တို့ ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝလောက်က မြို့ပေါ်တွင် ဝိတ်ရုံဟုခေါ်သော အလေးမရုံတွေရှိသည်။ ဝိတ်ရုံတွင် အလေးမရန်အတွက် တစ်လလျှင် တစ်ကျပ်ခွဲပေးရသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ကိုဝင်းဦး၏ ဗလကို သဘောကျသည်။ ဟာကြူလီကိုကြိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ညနေကျောင်းလွှတ်လျှင် ဝိတ်ရုံသို့ဝင်ပြီး ဝိတ်မသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် စပို့ရှပ်ဝတ်ပြီး လက်မောင်းသား ကြွားကြသည်။
ခုခေတ်ကလေးတွေ ကျူရှင်ပိနေသည်။ စာပိနေသည်။ စာပိနေသည်ဆိုရာတွင်လည်း အသိပညာ၊ အတတ် ပညာ၊ ဘဝပညာအတွက် လေ့ကျက်နေကြခြင်းမဟုတ်။ ကြက်တူရွေးစာအံသလိုရွတ်၊ ကျူရှင်တွေနှင့်ပတ် ချာလည်၊ ကျောင်းအားရက် ဂိမ်းဆိုင် အင်တာနက်ဆိုင်ပြေး၊ အစားအသောက်တွေကလည်း ကြောင်စာ ကြက်စာလောက်စားကာ ရှင်သန်နေကြသဖြင့် နံပိန်ခါးကိုင်းနေရခြင်းမှာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပေ။
ကျွန်တော်တို့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝက နေ့ခင်းမုန့်စားလွှတ်ချိန် တစ်နာရီအချိန်ရသည်ကို အသွား ၁၅ မိနစ်၊ အပြန် ၁၅ မိနစ်ကြာ လမ်းလျှောက်ရသည့်အိမ်သို့ အပြေးပြန်ပြီး ထမင်းစားရသည်ကို အမှတ်ရမိသည်။ လမ်းလျှောက်၊ ထမင်းစား၊ ကျောင်းလွှတ်ချိန် ဝိတ်မ၊ ကျူရှင်လည်းတက်စရာမရှိ။ ကိုယ့်စာကို ကိုယ်တာဝန်ကျေ အောင်လုပ်ပြီး ၁၀ တန်းအောင်လာရသည်။
“ကလေးတွေ ကျုံလှီလာရတာ အခြားအချက်ရှိသေးတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ မင်းထင်သလဲ”
ကျွန်တော်မဖြေတတ်သဖြင့် ခေါင်းကုတ်လိုက်သည်။ ဆရာက ကျွန်တော့်ကို အနီးရှိ မူလတန်းကျောင်းလေးမှ မုန့်စားတန်းကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည်။
“အဲဒီမှာ မင်းသွားကြည့် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီတဲ့ အသုတ်စုံဈေးပေါပေါ၊ အထုတ်စုံဈေးပေါပေါတွေပဲရှိတယ်။ ဟိုးက ကုက္ကိုပင်အောက်မှာကြည့်လိုက်။ သူများတွေ ထမင်းဘူးဖွင့်စားတာကို ငေးနေတဲ့ ကလေးတွေ။ သူတို့ ထမင်းဘူးတောင် ထည့်မလာနိုင်ကြဘူး။ မုန့်ဘိုးဆိုတာ အဝေးကြီး။ မနက်ကလည်း အိမ်က ထမင်းတောင် စားလာကြရဲ့လားမသိဘူး။ မိဘတွေက တစ်ညလုံး ဘောလုံးပွဲကြည့်။ ချဲထိုး၊ ဘောလုံးလောင်းနဲ့ အိပ်ယာက တောင် မထနိုင်သေးချိန်မှာ သူတို့ ကျောင်းကို လာကြရတယ်။ သူတို့ဘဝတွေက သိပ်မရေရာဘူး။ ဘယ်တော့ ကျောင်းထုတ်ခံရပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထမင်းဆိုင်တွေကို ရောင်းစားခံရမလဲမသိဘူး။ ဒီလို မိဘမျိုး၊ ကလေး မျိုး၊ ကျောင်းမျိုးတွေနဲ့ ဘယ်လိုကမ္ဘာလွှမ်းအောင် လုပ်ကြမှာလဲ”
မကြာသေးမီက ကမ္ဘာ့နို့တိုက်ကြွေးရေးနေ့ကို ကျင်းပသွားကြောင့် သတင်းစာတွင်တွေ့လိုက်ရသည်။ အထိမ်း အမှတ်နေ့တွင်မှ ကျောင်းသားတွေကို နို့တစ်ခွက်နှင့် ကြက်ဥတစ်လုံးပေးခြင်းသည် တစ်နှစ်စာ အဟာရဖြစ် မည်ဆိုလျှင် လိမ်လည်ခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ ပညာရေးလူ့ဘောင်တွင် အထိမ်းအမှတ်နေ့မှ နိုးထ၊ လူကြီးလာမှ ဟန်ရေးပြ၊ အမိန့်နှင့်မှကြောက်ကြသည့် အစွဲတွေကို ယခုတိုင် မချွတ်နိုင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း ရှေ့ကဖုံး၊ နောက်ကပေါ်၊ အခွံဟောင်းလောင်း မြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် စီမံချက်တွေ ကလည်းများလှသည်။
မြန်မာ့ပညာရေးလောကတွင် အစိုးရကျောင်းများ၌ ယနေ့တိုင် နေ့လည်စာမကျွေးနိုင်သေးပေ။ နေ့လည်စာ ကျွေးပြီး အာဟာရပြည့်ဝသည့် ကျောင်းသားများ မွေးထုတ်ရေးအစီအစဉ်ကို မည်သည့်အချိန်မှ အကောင် အထည်ဖော်မည်မသိပေ။ ကျောင်းများတွင် နေ့လည်စာကျွေးသည့်စနစ်ကို နိုင်ငံကြီးများတွင် အစိုးရကိုယ်တိုင် အလေးတယူဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နေခြင်းမှာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ယခင်က ဂျပန်ငပု တွေဟု နှိမ်ပြီးခေါ်ခဲ့သော ဂျပန်တွေ၏အရပ်အမောင်းကို ကျွန်တော်တို့ မမီတော့ပါ။ ဂျပန်တွေ ခေတ်မီအောင် လုပ်ရာတွင် ကျောင်းကစပြီး အခြေခံကို ပြုပြင်ကြသည်။ သန်မာထွားကြိုင်းအောင် လုပ်ကြသည်။ နို့သည်သူများနိုင်ငံတွင် ဈေးအပေါဆုံးအစားအစာစာရင်းဝင်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံလူတန်းစား၊ ဆင်းရဲသည့်လူတန်းစား ဝယ်သောက်နိုင်သည့် အနေအထားတွင်မရှိပါ။
တရုတ်ပြည်တွင် ဆင်းရဲသည့်တောကျောင်းများတွင် နေ့လည်စာကြွေးရေးအစီအစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်နေ ကြသည်။ ကျောင်းလာလျှင် ထမင်းစားရမည်ဆိုသည့်အသိက ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားစေရန် ဆွဲဆောင်မှု တစ်ခုလည်းဖြစ်နေသည်။ ထို့ပြင် တရုတ်အစိုးရသည် ကျောင်းများတွင် နေ့လည်စာအစီအစဉ်ကို ကျွေးမွေး ချင်သည့် NGO အဖွဲ့များကို အားပေးသည်။ ဖိတ်ခေါ်သည်။ လမ်းဖွင့်ပေးသည်။ အကူအညီလည်းပေးသည်။
ကျွန်တော်ကြုံကြိုက်သဖြင့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြို့နှင့် ၁၀ မိုင်ခန့် အကွာ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ထိုရွာအနီးတွင် စက်ရုံလာဖွင့်ထားသည့် ကိုရီးယားတွေက လာပြီး လေ့လာကြသည်။ သူတို့က ကွန်ပျူတာ လှူချင်သည်ပြောသဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ကျောင်းအုပ်ကြီးက ဘယ်လို ကွန်ပျူတာမျိုးတွေတောင်းရမည်နည်းဟု အကူအညီတောင်းသဖြင့် ကျွန်တော်လည်း စကားပြန်မှတစ်ဆင့် ကိုရီးယားများနှင့် စကားပြောဖြစ်သည်။
သူတို့က ကိုရီးယားရှိ သူတို့ကုမ္ပဏီမှ တစ်နှစ်တစ်ခါ စွန့်ပစ်လိုက်သည့် ကွန်ပျူတာများသည် အကောင်းပကတိ ရှိသေးကြောင်း၊ မိမိတို့ ထိုကွန်ပျူတာများကို ဤကျောင်းသို့ယူလာပြီး လှူဒါန်းလိုကြောင်းပြောသည်။ ထို့နောက် သူတို့က သူငယ်တန်းဘက်ကို လျှောက်ကြည့်ရင်း ကလေးတွေ မုန့်စားသူစား၊ ကစားသူကစား၊ ထိုင်သူထိုင်နေ ကြသည်ကိုတွေ့သွားသည်။ သူတို့က ကလေးတွေကို နေ့လည်စာ မကျွေးဘူးလားဟုမေးသည်။ ကျောင်းအုပ် ကြီးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုစနစ်မရှိကြောင်းပြောပြသည်။ သူတို့က စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီး၊ သူတို့စက်ရုံ တွင် နေ့စဉ် လူ ၃၀၀ စာလောက် ထမင်းကျွေးနေရကြောင်း၊ အကယ်၍ ဤကျောင်းမှ ကျောင်းသားအချို့ကို နေ့စဉ်ထမင်းကျွေးလိုပါကြောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုပြောသည်။
ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း ဝမ်းသာအားရဖြင့် သူငယ်တန်းကလေး ၆၀ ခန့်ကို နေ့စဉ်နေ့လည်ပိုင်း အာဟာရ သဘောမျိုးလာကျွေးလျှင် ကျေးဇူးတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ထိုကျောင်းအတွက် ကွန်ပျူတာ အလုံး ၂၀ နှင့်၊ သူငယ်တန်းကလေး ကျောင်းသား ၆၀ စာနေ့ခင်းအာဟာရကျွေးမှုကို ကတိတွေရသဖြင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း ပျော်နေသည်။
ထိုသတင်းကို တိုင်းပညာရေးမှူးရုံးမှ မည်သို့ကြားသွားသည်မသိ။ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ကျွန်တော့်ကိုခေါ် ပြီး ဌာနကို မတိုင်ပင်ဘဲ၊ ဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ၊ ဌာနကိုကျော်ပြီး ဘာမျှလုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း၊ အကယ်၍ ကိုရီးယား တွေက ကွန်ပျူတာ အလုံး ၂၀ ကိုယူလာလျှင်လည်း ဌာနကို လာအပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဌာနက သင့်တော်သ လောက်ပြန်ခွဲပေးခြင်းကိုသာ လက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နေ့လည်စာလာကျွေးသည့်အစီအစဉ်ကိုလည်း လက်မခံသင့်ကြောင်း၊ အစဉ်အလာမဟုတ်သည်ကို အစဉ်အလာလုပ်လိုက်လျှင် နောက်ပေါ်လာမည့် ပြဿနာ များကို ဖြေရှင်းရန်ခက်ကြောင်း ခေါ်ယူသတိပေးသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း ကိုရီးယားတွေကို ပြန်လည် ပြောပြကာ ညှိနှိုင်းကြည့်သည်။ ကိုရီးယားတွေက ကွန်ပျူတာလည်းမလှူ၊ အာဟာရလည်းမကျွေးတော့။ သူတို့ က ဒေသခံများနှင့် အဆင်ပြေအောင်နေချင်ကြသည်။ သို့သော် အစိုးရနှင့် ထိပ်တိုက်မတွေ့လိုသဖြင့် ရှောင် ထွက်ကာ ကျောင်းသို့ ငွေတစ်သိန်းသာ လှူလိုက်သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်တွင် ခေတ်မီနိုင်ငံတော်ကြီး ထူထောင်မည်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြွေးကြော်နေသောသူ များ ကွန်ပျူတာတွေ ဆုံးရှုံးသွားသည်။ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေနိုင်မည့် အားကောင်းမောင်းသန် ကလေးတွေအတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ဆုံးရှုံးသွားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အစဉ်အလာသမားများနှင့် ကြိုးနီစနစ်ကိုသော်လည်းကောင်း အပြောင်းအလဲကို သဘောထားမကြီးသူများကြောင့်သော်လည်းကောင်း မတွန်းနိုင်၊ မလှုပ်နိုင်၊ မရှူနိုင်၊ မကယ်နိုင်ဖြင့် ပန်းတိုင်ပျောက်တတ်ပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ပျောက်သော လမ်းတွင် ကျွန်တော်တို့ ယနေ့တိုင်လျှောက်လှမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးကို ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့် သတင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။
သနားစရာ ကလေးတွေ ထမင်းငတ်ပြီး ကွန်ပျူတာ အလုံး-၂၀
ခွားမသေး ကွန်ဇာဗေးတစ်တွေ ဆိုရှယ်လစ် လက်ကျန်တွေ
အကုန် အနာပေါက် .သေကြပါဇီ တော်….
ကမ္ဘာထက်၇ဆကြီးတဲ့.. ကမ္ဘာတလုံး.. သိပ်မဝေးတဲ့နေရာ(အလင်နှစ် ၄၀ကျော်)မှာတွေ့ထားကြောင်း…
It’s only 42 light years away, it could have liquid water, and it’s more than seven times bigger than our planet. So once we destroy this one, we’re all set.
This latest super-Earth is called HD 40307g. It may sound likeatax form, but it’s almost guaranteed to be paradise. It’s right inasweet spot orbit around HD 40307,asmaller star than the sun in the constellation of Pictor, where liquid water is possible. And the IRS can’t reach you.
“The longer orbit of the new planet means that its climate and atmosphere may be just right to support life,” study co-author Hugh Jones said inastatement.
“Just as Goldilocks liked her porridge to be neither too hot nor too cold but just right, this planet or indeed any moons that it has lie in an orbit comparable to Earth, increasing the probability of it being habitable.
အဲဒီကိုရောက်အောင်သွားဖို့ ၆လကြာတယ်ဆို ဟုတ်လားသိဘူး။
သူကြီး တင်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဘီဘီစီ က အခုဘဲ ရလိုက်တဲ့ သတင်းမို့ပါ။
He will meet opposition leader Aung San Suu Kyi and President Thein Sein.
Secretary of State Hillary Clinton was previously the most senior US official to go to Burma
when she visited in December 2011.
The Burma stop is part ofatrip built around the summit of the Association of Southeast Asian Nations in Cambodia.
The US has appointedafull ambassador to Burma and suspended sanctions to reward the country for political prisoner releases and the election of Nobel laureate Suu Kyi to parliament.
America is also set to ease its import ban on goods from Burma,akey part of remaining US sanctions.
Analysts say the Obama administration sees in the country’s political changes an opportunity to help counter the influence of China in the region.
Human rights groups are likely to criticise Mr Obama’s visit as premature, given that the ruling government has failed to prevent outbreaks of communal violence in the west of the country.
ယူအက်စ်ကိုလာကတည်းက.. ဆေးစစ်ချက်မှာ.. သူတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေမှန်း…သိသွားတာ…။
မြန်မာပြည် ပြန်ပြီး.. ဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုးလာတယ်.. ကြားရပါတယ်..။
မြန်မာဂီတ..သီချင်းခေတ်..သူရဲကောင်းတဦးအဖြစ်… တန်ဖိုးထားပြီး.. ၀မ်းနည်းရပါကြောင်း…
စလုံးစံတော်ချိန် ၁၁း၄၅ လို့ ပြောပါတယ်..
ဆုံးပြီ မဆုံးသေးဘူး ဆရာဝန် လက်လျှော့ထားပြီ အသက်ကယ်ဆေး ဆက်မထိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်သည် စသည်ဖြင့်
ကောလဟလတွေ အမျိုးမျိုး ထွက်ခဲ့သေးတာပဲ .. စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ..
ကောလဟာလ လို့ ကြားရပြန်တာဘဲ။
မဟာဆန်သူ အတွက် ဆက်ပြီး အသက်ရှင်သန် နေပါဦး။
အဲ့လာတေ ခက်တာပေါ့. တော်ပီဂျာ. ဘိရုမာ သဒင်း မဖတ်မိအောင်နေတော့မယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်.. ဥရောပ..အမေရိကတခွင်ပါတ်… အိုဘားမား ..ဘားမားသွားမယ်သတင်းတွေထွက်… မြန်မာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးက..အရှိန်အဟုန်မြန်… စတာတွေနဲ့..မြန်မာတွေ.. ကမ္ဘာတန်းကောင်းတဲ့အမြင်ထွက်လာပုံရပါတယ်..။
လောလောဆယ်.. မြန်မာ..ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေဈေး.. အကြွေ..ငွေစက္ကူအမှတ်တရတွေဈေး.. ဘုရင်ခေတ်.. ဒေါင်းဒဂ င်္ါးဈေးက.. ebayမှာ ခုန်တက်လာတာ.. သတိထားမိလို့ပါ…။
၁၈၅၂ခုနှစ်ထုတ်.. မြန်မာဒေါင်းဒင်္ဂါးကို.. ကျုပ်က.. ပြီးခဲ့တဲ့.. ၄-၅လလောက်က.. ဒေါ်လာ ၂၀လောက်နဲ့.. အီးဘေးက၀ယ်ထားတာ.. အခု.. ဒေါ်လာ၇၀အထက်.. ဈေးဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..
မြန်မာပြည်မှာ.. ၀ယ်ထား..စုထားသူတွေရှိရင်.. သတိထားမိကြဖို့.. သံချောင်းခေါက်ပါကြောင်း..
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ အဖြစ် ဒုတိယ အကြိမ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံရသော သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမား ပထမဆုံး အကြိမ် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် ခရီးစဉ် အတွင်း မြန်မာ ပြည်သူ လူထုအား မိန်ခွန်း ပြောကြားမည် ဟု အမေရိကန် သံရုံး က နိုဝင်ဘာလ ၁၄ရက် နေ့တွင် သတင်း ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
” မိန့်ခွန်း ပြော ကြား မယ့် နေရာ အတိအကျ တော့ မသိသေး ပါဘူး။ နေရာရွေး နေတုန်းပါ။ မီဒီယာ ကိုလည်း ဖိတ်ထားတော့ အခု လာမယ့် သောကြာနေ့ ကို သတင်း ထုတ်ပြန် သွားမှာပါ” ဟု အမေရိကန် သံရုံးမှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သမ္မတ အိုဘားမားသည် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံရေး နှစ် ၁၈ဝ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား သို့တတ်ရောက် ၍ ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ် ရှင်နာဝပ် နှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ် ထားပြီး ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွင် ယခုလ ၁၈ ရက် နေ့ မှ ၂၀ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အဆင့်မြင့် ဆွေးနွေးပွဲ များ သို့လည်း တက်ရောက်ပြီး အာဆီယံ ခေါင်းဆောင် များနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော် ပြန်ကြားရေး တာဝန် ခံ Jay Carney က တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထားသည်။
Ko toe passed away at 8:18 am , S’ pore time.
အန်တီ မီမီဝင်းဖေရဲ့ ဖေ့စဘုတ်က ကူးလာတာပါ..
ဟောဒါကတော့ ဂဇက် ဇာတ်လိုက်ကျော် ကဘုန်းကျော်ရဲ့ ဝေါ်လ်ပေါ်က
မသာကျော်သူ..ခင်ဗျား…တာဝန်ကျေပါစေ…ဦးတိုးကို မီးမရှို့ နဲ့ ။
မဟာကြောင်ကတော့ ခုလို ဆိုပါတယ်..
အိုး အဖ ဘုရားသခင်….
ကိုတိုးကြီးကို မခေါ်ပါနဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ အိန်းအိန်း၊ နေရယ်မာန်၊ ဗီဗာဟိန်း လေးယောက်ပေါင်းကို ခေါ်သွားပါ။
အသည်းရောဂါပိုး..စီကြောင့် ကင်ဆာအဆင့်ရောက်နေမှန်း.. (ဒါမှမဟုတ်) အသည်းရောဂါစီပိုးကူးစက်ခံနေရမှန်း ယူအက်စ်လာကတည်းက ဆေးစစ်မိပြီး.. သိသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်..။
သိဆို.. သူ့ကိုယူအက်စ်စပွန်စာလုပ်သူက.. ဆရာဝန်လေ..။
တကယ်တော့.. စီပိုးကြောင့်ဆိုရင်.. သိပ်တော့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ သိထားပါတယ်..
အသည်းကင်ဆာဆိုတာအထိရောက်ရင်တော့.. တော်တော့်ကို မလွယ်တာပါ..
အထဲက.. အကြိတ်အရွယ်အလိုက်.. အသည်းအစားထိုးကုရမရ.. တိုင်ပင်လုပ်ရမှာဖြစ်တာကိုး..
ကိုတိုးကြီး.. သူ့အခြေအနေသူ.. အစအဆုံးသေသေချာချာသိထားတယ်လို့.. ထင်ပါတယ်..။
ဟိုတစ်ခါ ကိုတိုးကြီး ဖုန်းနံပတ်မေးတုန်းက ကျွန်တော်မေးလ်နဲ့ ပို့ပေးခဲ့ဘူးတယ်လေ…။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က ကိုတိုးကြီးနဲ့ မသိခဲ့ပါဘူး…။
အမေရိကားက သူငယ်ချင်းကို ကိုတိုးကြီးဖုန်းနံပတ်ပေးလိုက်ချင်လို့ ခွင့်ပြုပါ ဆိုပြီး
သူကလည်း ပေးလိုက်ပါဗျာလို့ ခွင့်ပြုခဲ့ရှာပါတယ်…။
အဲဒါလေး အမှတ်တရ ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ် သူကြီးရေ…။
လှမ်းဆက်တော့.. သူက အမေရိကားလာဖို့ ဒေါက်တာဇော်မင်းဦးတို့နဲ့စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်နေတာမို့.. သူ့ပွဲက… ကျုပ်တို့ခေါ်တဲ့ပွဲမဖြစ်သွားတာပါ…။
BURMA RELATED NEWS – November 13-14, 2012.
AP – Myanmar’s Suu Kyi meets with top leaders in India
AP – SKorea seizes suspect missile cargo for Syria
Reuters – Myanmar says to free 452 prisoners ahead of Obama visit
Reuters – Myanmar quake death toll up to 26, tremor hits capital
Reuters – Suu Kyi asks India to stand by democracy in Myanmar
Reuters – Rights groups press Obama aides on Myanmar, Cambodia
Reuters – PepsiCo to sign Myanmar bottling deal as rivalry with Coke grows
AFP – Suu Kyi warns India against Myanmar over-optimism
Aljazeera – Myanmar’s Suu Kyi to speak in India
ANI – Myanmar Opposition leader Suu Kyi arrives in India
ANI – Aung San Suu Kyi arrives in India, to meet Manmohan Singh tomorrow
IANS – Moderate earthquake jolts Myanmar
IANS – Suu Kyi arrives in India on nostalgic visit
IANS – Suu Kyi in India, nostalgia in the air
Hindustan Times – LSR gears up for alumna Suu Kyi’s return
Telegraph India – Old friends and school on Suu Kyi to-do list
Bernama – Myanmar Seeks Donations For Quake Repairs
The Irrawaddy – Rohingya Refuse to Register as ‘Bengali’
The Irrawaddy – Rangoon’s Tourism Boom Risks Heritage
The Irrawaddy – Cheap Cooking Oil Imports Hit Burmese Producers
The Irrawaddy – Press Council Releases Draft Code of Ethics
Mizzima News – Security concerns prevail ahead of Obama visit to Burma
Mizzima News – Suu Kyi lays wreath at tomb of Mahatma Gandhi
Mizzima News – Moral leadership required to calm tensions in Rakhine State: ICG
DVB News – Group says death toll in Arakan higher than gov’t figures
နိုင်ငံတကာသုံး ငွေထုတ်ကတ်ဖြစ်သည့် Master Card, Maestro Card, Cirrus Card များအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ၂၀၁၂
The U.S. government is closely monitoring and supporting Burma’s progress on reform, and the core authorities underlying our sanctions remain in place. Despite positive changes, the United States remains concerned about corruption, remaining political prisoners, continued military ties to the Democratic People’s Republic of Korea, and ethnic conflict. U.S. policy remains calibrated, and through the Treasury Department’s Specially Designated Persons (SDN) list, the United States will take steps to exclude those who continue to perpetrate the violence, oppression, and corrupt practices of the past from participating in our countries’ growing bilateral diplomatic and economic ties. U.S. persons are still prohibited from engaging in transactions with persons included on the SDN list, as well as any entity in which suchaperson owns, directly or indirectly,a50 percent or greater interest. The SDN list is available at http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx.
Obama announced the resumption of U.S. aid program in Myanmar … would include assistance of $170 million in total for fiscal 2012 and 2013, …
မျိုးသန့် | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၁ နာရီ ၃၉ မိနစ်
“အဲဒီတော့ ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ ကိုလိုနီလက်ထက်ကတည်းက မြို့ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်တခါ လူဦးရေကလည်း ခြောက်သန်းကျော် ရှိတယ်။ ဒီ ခြောက်သန်းကျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သွားရေးလာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အင်မတန် အခက် အခဲတွေ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တခါ ရေကောင်းရေသန့်တွေရရှိရေး၊ ရေဆိုးတွေ သန့်စင်ရေး ဒီအပိုင်းတွေကလည်း ကျနော်တို့မှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်”
“အဲဒီတော့ ခင်ဗျား ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အနေနဲ့ ရန်ကုန်လူထုကို ဒီကိစ္စတွေများ ပြေလည်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့လူထုက ခင်ဗျားကို ပိုပြီးတော့ ချစ်မှာပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း သူလည်း ဒါကို တော်တော်
လေးကို သဘောကျသွားတာရှိပါတယ်။ ကျနော်ထင်ပါတယ် သူ ခေါင်းတော့ မငြိမ့်ပေမယ့်လည်း သူ့လူတွေကတော့ အကုန်လိုက်မှတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မှတ်တမ်းတော့ ဝင်သွားတယ်လို့ ပြောလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
“နောက်တခုကတော့ သမ္မတကြီး အိုင်ဆင်ဟောင်းဝါး လက်ထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးကို ဟိုင်းဝေးကြီး ဖေါက်ပေးဖို့ ဆိုပြီးတော့ အစီအစဉ် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော်တို့ တဆင့်စကား ကျနော်တို့ ကြားရတာပါ။ သို့သော်လည်းပဲ အကြောင်းကြောင်း တွေကြောင့် ဒီဟိုက်ဝေးကြီးက ဖေါက်လုပ် မပေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး”
“အဲဒီတော့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်သွားတဲ့ ဒီဟိုင်းဝေးကြီးကို ကျနော်တို့ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးကို ကျနော်တို့
ဖေါက်ထားပြီ။ သို့သော်လည်း လမ်းကတော့ လမ်းကြမ်း အဆင့်ပဲ ဖြစ်နေသေးတယ်။ ဒီမှာလည်း နည်းပညာပိုင်းတွေ ဘာတွေ ကျနော်တို့ကတော့ ခင်ဗျားတို့လောက် ခေတ်မမီတဲ့အတွက် Accident တွေကလည်း မကြာခဏဖြစ်တယ်၊ ယာဉ်တွေ ခဏခဏ တိမ်းမှောက်တယ် လူတွေရဲ့ အသက်တွေကလည်း ဆုံးရှုံးကြ ပြုကြတယ်”
“ဒီလမ်းကြီးကို ခင်ဗျားတို့များ ပြုပြင်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ဘာညာနဲ့ ဒါတွေလည်း ကျနော် တောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သူလုပ်ပေးဖို့ ဟိုဒင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေက ဒီလို ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ အင်အားကြီး နိုင်ငံတခုအနေနဲ့ကတော့ ဘာမှ ပြောပလောက်တဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးအမြတ်ကလေးတွေ ရအောင် ဒါလေးတွေကျနော် ပြောခဲ့ပြုခဲ့ တောင်းခဲ့တာလေးတွေ ရှိပါတယ်” ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ဖနွမ်ပင်ရောက် မြန်မာ မီဒီယာများအား ပြန်လည်ပြောပြသွားသည်။
Dwight D. Eisenhower : 34th President of the United States from 1953 until 1961.
Political party :	Republican
Profession : Army Officer (1st Supreme Allied Commander Europe)
Vice President :	Richard Nixon (Richard Nixon, vice president under Dwight D. Eisenhower, rang the bells at Shwedagon Pagoda in 1953.)
မြန်မာပြည်ကို အလည်လာဖူးတဲ့.. အခြား ယူအက်စ်သမ္မတကြီး.. တဦး.. ( သမ္မတအနေနှင့်မဟုတ်)
ဘကြီးစိန်ကို သတင်းသမားတွေ မဗျူးခင် ၀ိုင်းကန်တော့ကြ …
မူရင်း Sharing Together Group Page facebook
အမေရိကန်-မြန်မာ အရေး အခြား တစ်ဖက်မှ အမြင် …
(နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွါးရေးစိတ်ဝင်စားသူတိုင်း
မဖြစ်မနေ ဖတ်သင့်သော ရှုထောင့် )
ရေးသားသူ – ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း
(မူရင်း အတိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်)
ဒီတခါတော့ Devil’s advocate လုပ်ပါရစေ….
မြန်မာတွေ အများစု က (လူ) ကို ကြည့်ကြတာ များတယ်
(မူ) ကို မကြည့်ကြဖူး
The singer not the song လို့ပြောလို့ရတယ်
(မူ) ထက် (လူ) က အရေးကြီး ကြတယ်
အိုဘားမား ကိုကြိုက်ရင် (လူ) ကိုထောက်ခံ တာ
(မူ) (Policy) ကို ဆန်းစစ်ကြတာ မဟုတ်ဖူး
အမေရိကန် Constitution မှာဒီမိုကရေစီ ရဲ့ (အနှစ်သာရ) တွေ Principle တွေပါတာအမှန်ပဲ
American Founding Fathers တွေတော်တာက ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာ (သိ) လို့ မဟုတ်ဖူး
အုပ်ချုပ်ရေး အတွက် Executive Branch ကိုအာဏါပေးရတယ်
သို့သော် (အါဏါရှင်) မဖြစ်ရအောင် ၊ Balance of Power ဆိုပြီး လုပ်သွားကြတယ်
ဒါထက်တိုးပြီး တမင် မခက်ခက်အောင် လုပ်သွားကြတယ်
Judicial Branch ဟာ Equal လို့ဆိုပေမဲ့
အရင်က အါဏါ မရှိဖူး ၊ အခု ရှိတယ်
ခုတော့ ထစ်ကနဲ ဆို တရားဆွဲ ကြတော့
တရားဆွဲ တာနဲ့ ပဲ လုံးခြာ လိုက်နေတယ်
Cost of Business တက်လာပြီး
Invest မလုပ်နိုင်ဖူး ၊ ရှေ့နေဖိုးနဲ မွဲ ကုန်ကြရပြီ
Samsung နဲ့ Apple ကိုသာ ကြည့်
တချိန်ထဲမှာ ဆီးနိတ် ဟာ လူကြီးတွေ ဆိုပြီး (မင်းတို့ စည်းကမ်း မင်းတို့လုပ်ကြ) ဆိုပြီး လွှတ်ပေးခဲ့တယ်
Senate မှာ filibuster ကိုကျော်ဖို့ မဲ ၆၀ ရ မှ ဥပဒေ တစ်ခု ကို မဲခွဲခွင့် ရနိုင်တယ်
အခု ဘတ်ဂျက်ကို မစဉ်းစားတာ (၃) နှစ် ရှိပြီ
Debt Ceiling ကို မကိုင်ခဲ့လို့ New Year မှာ Fiscal Cliff လာတော့မယ်
၆၀၀ Billions ပြဿနာ
တိုင်းပြည် recession ထဲပြန်ရောက် နိုင်တယ်
ဘယ်သူ ၊ ဘယ်ပါတီကမှ တာဝန် မယူချင်ကြဖူး
အနားယူတော့မဲ့ Ron Paul က Our Constitution Failed us ဆိုပြီး ပြောသွားတယ်
အမေရိကန် Constitution မှာ fault Lines တွေ အများကြီး
Devil is in details လို့ခေါ်ပါတယ်
သေသေခြာခြာ ကိုင်တွယ်မှ . အသေးစိပ်ကြည့် မှ အပေါက်တွေ အများကြီး
Human Rights အကြောင်း လက်ချာရိုက်သွားတဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား ဟာ
ပါကစ္စတန် မှာ Drones နဲ့ သတ်လိုက်တာ သောက်သောက်လဲ
အမေရိကန် အကျိူး အတွက် ကြတော့
Human Rights ဆိုတာ ဘယ်ဆီရောက် သွားမှန်း မသိ တော့ဖူး
Mt Rushmore ဆိုတာ အမေရိကန် သမ္မတတွေ ရုပ်ထု ၊ ထုထားတဲ့ နေရာ
UN Rappatour က မူလပိုင်ရှင် Red Indians တွေရဲ့မြေ မို့ ..Compensation ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်
ခုထိ ဘာမှ မလုပ်သေးဖူး
အမေရိကန် Interior Dept က Indian Affairs Bureau က ညစ်ထားတာတွေ ဟာ
ယုံချင် စဖွယ် မရှိဖူး။ အင်မတန် ယုတ်မာတယ်
ဘယ်သူမှ ဖြေရှင်း မပေဖူး
ဘယ်မှာ လဲ justice
မူလပိုင်ရှင် Red Indians တွေကို သတ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို လု ယူ ခဲ့ကြတာပါ
Rule of Law ကိုတွင်တွင်ပြောကြတယ်
Abortion ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့
Roe v Wade ဆိုတဲ့ landmark case မှာ
Justices တွေက ၇မဲ ၂မဲ နဲ့ အမေရိကားမှာ မိန်းတတွေဟာ
Abortion rights ရှိတယ်ဆိုပြီး ဥပဒေ ထုတ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ
ပြည်နယ် ၅၀ လုံး ၊ Abortion ဥပဒေ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိတော့ဖူး
ဒါ Judicial Activism ပဲ
Congress မှာ မနိုင်လို့ Judicial branch ကိုဆွဲသုံးတာ
Judicial Branch က interpret လုပ်ရမှာ
ဥပဒေ လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဖူး
Rule of law ရဲ့ process ကို မိမိ အလို အတွက် ဖျက်ပစ်တာပဲ
ဒါကြောင့် ခုထိ ဒီကိစ္စ အတွက် အသေအကြေ
ဆော်ပလော်တီး နေကြတာ အမေရိကားဟာ ၅၀-၅၀ နိုင်ငံဖြစ်နေပြီ
Congress က gridlock ပဲ။ ဘာမှ လုပ်လို့ မရ တော့ဖူး
ပြောမယ်ဆိုရင် … ပြောစရာတွေ အများကြီးပါ ….
မသိတဲ့ သူတွေကို လာရွှီး သွားတာ
သိပ်တော့ လည်း ယုံ မနေကြနဲ့
အမေရိကန် လည်း ဘာမှ မထူးဖူး
သူ့အကျိုး သူ လုပ်တာပဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ4Freedoms လာ (အာ) သွားတာ
Saudi မှာကြတော့ ၊ ဘာကြောင့် သွား မပြော ရဲ သလဲ
(ရေနံ) ခေတ် မကုန်သေးဖူးလေ
နောက်အနှစ် ၁၀၀ မှာ ရေနံ မလိုတော့ဖူး ဆိုရင်
ဆော်ဒီ တွေ ရေငတ်သေရင် လှည့်တောင်ကြည့်မှာ မဟုတ်ပါဖူး
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ရှေ့ ကရုပ်ပြပါ
တရုတ် ကို ပြန် balance လုပ်နေရတာ
တရုတ် စီဂျင်းပင် နဲ့ အိုဘာမား ပြိုင်တူ အရွေးခံ ကြရတယ်
(၄) နှစ်နေရင် ကြည့်ကြပါ
ဘယ် နိုင်ငံ တိုးတက်လာသလဲ ဆိုတာ
ဘယ်နိုင်ငံ ဒေ၀ါလီ ခံရမလဲ ဆိုတာ
အိုဘားမား ကိုရွေးတယ်ဆိုကတည်း က
အမေရိကန် ဟာ ဥရောပ နောက် လိုက်တာပဲ
အာဏါအတွက် တိုင်းပြည် ပိုက်ဆံ သုံးမှာ
အိုဘားမား က (၄) နှစ်မှာ ၅ trillions ဖြုန်းပြီးပြီ
အမေရိကန် ရဲ့ အကြွေး က ၁၆ တြိလျှံ ဒေါ်လာ ရှိတယ်
Debt ကို လျော့ဖို့ မစဉ်းစားကြသေးဖူး
တိုင်းပြည် ဂျောက်နားရောက်နေပြီ ၊ သတိ မရှိကြသေးပါ
၁၉၈၂ စာရေးသူ ရောက်တဲ့ အမေရိကား နဲ့
၂၀၁၂ အမေရိကား ၊ ကွာမှကွာ
မထူးဖူး ၊ ရိပတ်ဖလင်ကင် ရော ဒီမိုကရက် တွေ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲ ပါပဲ
(မသိ)တဲ့ သူတွေ က အိုဘားမား ၊ အိုဘားမားဖြစ်နေကြတာ
နောက် (၄) နှစ်ကြာရင် ။ ကြက်ဥ ပုတ်နဲ့ ပေါက်ချင်ကြမှာ
ဒါကြောင့် Ron Paul က US Constitution fails လို့ပြောတာ
၂၀၀၈ မြန်မာ Constitution ဟာ
ဘယ် Constitution မှ (အသေ) မဟုတ်ဖူး
ပြင်ချင်တိုင်း လည်း (ပြင်)(ပြင်) ချည်း အော်လို့ (မရ)ဖူး
ဘာတွေ ပြင်ချင်တယ် ၊ ဘယ်လို ပညာ ပါပါ approach လုပ်မယ် ဆိုတာကို
(သိ) ဖို့ လိုလိမ့် မယ်ထင်မိတယ်
၂၅% ဆိုတာ သူတို့ စစ်ဗိုလ်တွေကို တရားမဆွဲ နိုင်အောင်
သူတို့ဖက်ကကြည့် ရင် Argentina မှာလို အဖြစ်မခံ နိုင်ဖူး
ဒါကို နားလည်လို့ မင်ဒယ်လား က အရေးယူမဲ့ အစား
Truth and reconciliation ဆိုပြီး လုပ်သွားတာ
အင်မတန် ပညာ ပါတယ်။ အင်မတန် ဥါဏ်သွားတာ
အာဏါ အပြောင်း အလဲဖြစ်အောင်
တူရကီမှာ အစိုးရကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်
ဒါပေမဲ့ အစိုးရ က လုံခြုံရေးကောင်စီ ရှေ့မှာ
တနည်းအားဖြင့် အစိုးရ ကို စစ်တပ်က ဓါးမိုးထားတာပဲ
အနှစ် (၂၀) ကြာမှ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ် တွေအားကောင်လာမှ
အစိုးရ က စစ်တပ်ကို (ကျော်) ၀ံ့ တယ်
အီဂျစ် ကြတော့ (လူထု) က နိုးကြွ ပြီးသား
ဒါကြောင့် သမ္မတက စစ်ကောင်စီ ကို ဖပ်ပစ်လိုက် ရဲတယ်
လက်ရှိအခြေအနေမှာ အတိုက်ခံတွေတင် မကဖူး
လက်ရှိ စစ်ဗိုလ်လူထွက် တွေတောင် (ကာလုံ) မှာ စစ်တပ်လူက ပိုများတယ်
ဒါ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီး အကွက်ဆင်သွားတဲ့ check and balance ပဲ
စည်းကျော်ရင် စစ်တပ် က ၀င်လာမှာ
ဒါက စစ်တပ် နဲ့ဆိုင်တာ
တိုင်းရင်းသားတွေ ဖက်ကို ကြည့်ပြန်ရင်လည်း
လက်ရှိ Constitution ကို
(ဘာနဲ့) ( အစားထိုး) မှာ လဲ ဆိုတာကို စဉ်းစား ပြီး သား ရှိရမယ်
ဥပမာ ဖက်ဒရယ် အော် ရုံ နဲ့ မရ
အားလုံး လက်ခံ နိုင်မဲ့ ဖက်ဒရယ် ဖြစ် ရမယ်
State Rights နဲ့ Federal Rights demarcation ကိုစဉ်းစားပြီး ပြီလား
State-to-State Rights တွေရော
အမေရိကားမှာ Colorado မြစ်ရေခွဲတာ ပြဿနာဖြစ်နေကြတယ်။
ပြည်နယ် က လက်နက်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို
၂၀၀၈ မှာ ဒီပြဿနာ ကို မဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့
Nepal မှာလည်း ဒီပြဿနာ ကအဓိက လာဖြစ်တာပဲ
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တုန်းက လို လက်နက်စွန့်ရင် ပြီးရော
လုပ်ချင်တာလုပ် ဆိုပြီးလုပ်လို့ မရတော့
လက်နက်ရှိတဲ့ ဒီလူတွေ ၊ အရင်လို corrupt ဖြစ်ရင် ဘယ်လို ကိုင်မှာလဲ
8 States မှ …. ခွဲထွက်ခွင့် ရမှ ..ဆိုရင်
ပြဿနာ ကပြီးမှာ … မဟုတ်ဖူး
ဒီတော့ မှ …..
မပြင် ပဲထားတာက ပိုကောင်းလိမ့်မယ်
Balkanization တော့ အဖြစ် မခံ နိုင်ဖူး
တဖက် ကလည်း ဘင်္ဂါလီ ကုလား တွေ ရန်က ရှိသေးတယ်
အင်မတန် သိမ်မွေ့တဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာ တွေပါ
ဒေါ်စု ဒါတွေ နားလည် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူလည်း အရမ်း မရွှေ့ တာပေါ့
အိုဘားမား ကို လူတွေက လူကြည့်ပြီး ကြိုက် ကြတာ
ပေါ်လစီ ကို ပြေးကြည့် ကြပါဦး
နိုင်ငံရေးမှာ Permanent Alliance / Friend ဆိုတာ မရှိဖူး
Permanent interest ဆိုတာပဲရှိတယ်
အမေရိကန် တွေနဲ့ ပေါင်းကြည့် ကြပါဦး
နောက် (၃) နှစ် ဆိုရင်
Yankee Go Home ဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်
အမေရကန်တွေ ရဲ့ အားနဲချက် က arrogance ပဲ
မြန်မာ တွေ Triangulation ကိုနားလည် ဖို့လိုတယ်။
လောလောဆယ်မှာ American Constitution က
Ideals and Principle မှာကောင်းပေမဲ့
Implementation မှာ (လူ) တွေကြောင့် (ပေါ်လစီ ) နဲ့ (မူ)
ပျက်စီး ပြီး ၊ အခက်အခဲ ရှိတယ်
နောက်အရေးကြီ တဲ့ အချက် က
American Constitution က Public Representation ကို
အခြေခံတဲ့ အတွက် Legitimacy ရှိပေမဲ့
မဲပေးသူတွေကို မဲ ရအောင် (ဖါး) ရတာကြောင့်
ပြီး time limit မရှိတဲ့ အတွက် ၊ ရွေးခံရပြီးရင်
အာဏါ သုံးပြီး (လုပ်စား) တွေဖြစ်ကုန်ရော
တိုင်းပြည် အတွက် ဆိုတဲ့ (မျိုးချစ်စိတ်) ပျောက်ကုန်ရော
American Corruption ကလည်း နဲတာမဟုတ်ဖူး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ က ရာထူးရမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုသုံးပြီး Corrupt ဖြစ် (ငွေ) ရှာကြတာ
အမေရိကားမှာ က (ငွေ) ရှာပြီး ရာထူးကို (၀ယ်ယူ) ကြတာ
(မှတ်ချက်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ (ငွေ) မရှိလို့ မရ)
ပြီး မှ အာဏါမက်ပြီး corrupt ဖြစ်ကြတာ။
Lobbyists တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တွေဟာ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ် ဒူဝေေ၀ပဲ
တချို့ဆို လင်က လုပ်စားနိုင်ငံရေးသမား ၊ မယားက Lobbyist
အမေရိကန် စနစ်ကို အမြဲတန်းရွေးကောက်ပွဲ လို့ခေါ်ကြတယ်
ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတာနဲ့ နောက်ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ငွေရှာရတာကိုး
တရုတ်က representation မရှိတဲ့ အတွက် Legitimacy မရှိ
ဒါပေမဲ့ efficiency ရှိတယ်
သူလည်း corruption ရှိတယ်
At least သူတို့ က corruption ကို အသိအမှတ် ပြုတယ်
သူတို့လည်း ခေါင်းခဲ နေကြတာပဲ
အမေရိကန်တွေက corruption ကို acknowledge ကို မလုပ်တာ
ပြဿနာ က နှစ်နိုင်ငံလုံ: မှာ
သေသေချာချာ လေ့လလာရင် ပြဿနာ က (representation) ပဲ
အချိန် ရမှ အသေးစိပ် ဆွေးနွေး တင်ပြ ပါ့မယ်
Governance ကိုနား မလည် တဲ့သူတွေသာ
နတ်ရေကန်ထဲ ဆင်းလိုက် သလို
ငိုချင်း ရှည်ကြီးတွေ ငို နေကြတာ
နိုင်ငံရေး ဆိုတာ မြင်တာ ၊ ထင်တာ ထက် (ရှုပ်) တယ်ဆိုတာကို
နားမလည် ၊ သဘော မပေါက် ကြလို့ပါ
စကားမှားပြီး Nuremberg ဆိုတာ (သုံး) လိုက်တာနဲ့
၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်း ပြောင်းသွားတယ်
ကိုယ်က (မမှား) ဖို့လိုတယ်
ရှေ့ တလှမ်း တိုးရင် (အဖြေ) (သို့) (အကာ) (ဒိုင်း) ရှိရမယ်
လက်တွေ့ ကမ္ဘာ ဟာ Utopia စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာ ကို
နားလည် စေချင်တဲ့ စေတနာ ပါ
လက်လက်မြင် တိုင်း (ရွှေ) လို့ မထင် လိုက်ကြပါနဲ့
(လူ) ရော (မူ) ပါကြည့် တတ်ကြပြီး
(ပေါ်လစီ) ဆိုတာ ကို နားလည်အောင်ကြည့်တတ် ကြပါစေသား
နိုင်ဝင်ဘာလ (၂၂)ရက် ၂၀၁၂
BURMA RELATED NEWS – November 19-22, 2012.
AP – Obama makes history with Myanmar, Cambodia visits
AFP – Myanmar orders businesses to repay ’embezzled’ cash
Fuseworks – Fonterra appoints new Country Manager for Myanmar
Asia News Network – Myanmar to deepen relations with China
CNN – Reporters emerge from shadows as Myanmar loosens grip on press
Christian Science Monitor – Obama’s Myanmar speech sends message to North Korea
Times of India – Suu Kyi’s tour of India sets stage for deepening of relations with Myanmar
Stars and Stripes – US begins tenuous military relationship with Myanmar
PRWeb – Refugee Camps Left out of Democratic Reform in Burma
The Star Online – Investors flock to Myanmar although investment law remains unclear
Bloomberg – Obama Hails Myanmar’s Progress in First Visit
Bernama – Myanmar, Thailand Invite International Investors To Engage In Dawei SEZ Project
Channel NewsAsia – Aung San Suu Kyi becomes UNAIDS ambassador
Scoop – Burma: Release Of Detainees Welcome, But Questions Remain
The Japan Times – Noda to restart yen loans to Myanmar
The Week – Obama’s Burma visit: six hours that changed Suu Kyi’s fortunes
27 November 2012: The upcoming meeting between Burma’s government and the Chin National Front (CNF) is set to take place in Rangoon from 7-8 December 2012. To read more: http://www.chinlandguardian.com/news-2009/1923-cnf-govt-confirmed-date-for-rangoon-meeting.html
North Korean missile materials shipped to Myanmar, confiscated by …
The Japan Daily Press-10 hours ago
Japan seized fromacargo vessel docked at Tokyo items which can be used to manufacture missiles. The cargo, headed to Myanmar via China, is suspected to have originated from North Korea in violation ofaU.N. Security Council embargo on North Korean weapons exports.
The raid on August 22, which Japan says was requested by the U.S. government, yielded 50 metal pipes and 15 high-specification aluminum alloy bars which are believed to be of the required quality for developing nuclear weapons. But since Myanmar has relinquished its plans of developing nuclear weapons, officials from Japan, the United States, and South Korea believe that the materials might be used for developing missiles instead, which, according toaSouth Korean government official, it might use for border disputes in the future. The U.S. has lately started to support Myanmar’s transition towards democracy and has requested that the country sever its military ties with North Korea, something that Pyongyang has complained about.
The cargo was addressed toacompany in Yangon, Myanmar’s capital, called Soe Ming Htike, which the U.S. believes to be justafront for the country’s military procurement activities. Japanese officials believe that the aluminum alloy was acquired from China by North Korea, who does not have the technology to produce the material. Both Myanmar and China have denied any involvement in violating the U.N. bans.
MODERN News Journal (2-Nov-2012) မှာ ပါလာတယ်တဲ့ ။
ကမ္ဘာမှာ ကင်ဆာအဖြစ်အများဆုံးမှာ မြန်မာက နံပါတ် (၂) တဲ့ ။
ဂျပန် ဂျူးရော်ကု ဘဏ်လုပ်ငန်းစု မြန်မာမှ ဧရာဝတီဘဏ်လုပ်ငန်းစု နှင့်ချိတ်ဆက်
သဘောက.. သိပ်မကြာခင်မှာ.. အင်္ဂါဂြိုလ်မှာ.. သက်ရှိရှိတယ်.. သိမှာပါတဲ့..
တလက်စထဲ.. မာကျုရီဂြိုလ်မှာလည်း.. ရေခဲတွေ့တဲ့သတင်းတက်လာပါတယ်..
Fox News-58 minutes ago
If there are little green men on Mars, they haven’t shown up yet. NASA has quelled rumors thata“major discovery” from the latest robotic probe …
A composite image of Mercury’s north pole.
သူကြီးတော့ အရင်ဘဝ က တော်စပ်ဘူးသော အမျိုးအဆွေ တွေ ရှာတွေ့တော့ မှာမို့ အတော် ပျော်နေပုံရတယ်။
ဗြိတိန် မင်းသား ဝီလျှံ နဲ့ ကြင်ယာတော် ကိတ် တို့ ရင်သွေးလေး တည်နေပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းကို တပြည်လုံး ပျော်ရွှင်စွာ နားထောင်ကြရပါတယ်။
အဲဒီ သတင်းလေး ဖတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ သတိပြုစေဖို့လေးပါ။
ကိုယ်ရဲ့ ပထမဆုံးဦးဆုံး ရင်သွေး လေး အတွက် ကိုယ်ဝန်တည်စ အချိန်မှာ တိတ်တိတ်လေး လူသူ မသိအောင် ဖျက်ပစ်ချင်လား။
ခင်ပွန်းသည် အပါအဝင် မိသားစု သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အားလုံး က ဝမ်းသာလှိုက်လှဲစွာ သတင်းဖြန့်ပေးတာကို လိုချင်လား။
ဒါဟာလဲ မိန်းမတတစ်ယောက် ရဲ့ တန်ဖိုး ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း တစ်မျိုးပါဘဲ။
ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘဲ မြင့်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သတိတရား လေး နဲ့ ကိုယ့်ဘဝ ကို တန်ဖိုးထားနိုင်ဖို့ပါ။
He or she will one day be head of the armed forces, supreme governor of the Church of England, head of state of the UK and, subject to approval by the Commonwealth, 15 other countries.